Indlela Emfutshane Yetekhnoloji | Isilimela 2022
I-18 yeeNkqubo eziPhambili zoLawulo lweXesha kunye nezixhobo (2021 ihlaziyiwe)
Ngamakhulu eeapps kunye nezixhobo onokukhetha kuzo, usenokungazi ukuba ungaqala ngaphi. Ke, nazi ii -apps zolawulo lwexesha ezili-18 zokuphucula imveliso yakho.
IiNkqubo ezi-7 eziPhambili zoLawulo lweProjekthi ukukhulisa uMveliso
Ulawulo lweprojekthi aludingi ukuba lube yinto enzima, hayi ukuba unalezi zixhobo zolawulo lweprojekthi ukuze ulilungelelanise iqela lakho ngokufanelekileyo.
I-10 yeeKhalenda eziSebenzayo zokuHamba kwiNdlela ngo-2021
Ngaba ujonge usetyenziso olusebenzayo lwekhalenda oza kuyisebenzisa ukuze ube nemveliso engcono? Fumana apha ezona zixhobo zilungileyo zokulandela umkhondo, ukucwangcisa usuku lwakho, kunye nokuseta izikhumbuzo.
I-20 yeeNkqubo zoLwazi oluNgcono lokuZigcina kuMkhondo ngo-2021
Ngaba ufuna ukuhlala ucwangcisiwe kwaye ukonyuse imveliso kunye neqela lakho? Awungekhe uphulukane nolona luhlu lokwenza uluhlu lweeapp ukukunceda ugcine umkhondo.
I-15 yeeNkqubo zoMbutho eziGqwesileyo zokuKhulisa uMveliso wakho ngo-2021
Ngaba ufuna ukulungelelaniswa ngakumbi kunye nemveliso? Ezi zezona zixhobo zilungileyo zilishumi elinesihlanu zokufaka ukuze ukonyuse imveliso yakho.
I-7 yeeNkqubo zoSeto eziSimahla eziSimahla ezenza ukuba ukuCwangciswa kube lula
Thatha ubunzima ekwenzeni idinga kunye nenkonzo yokuhlela! Nazi izinto ezi-7 ezisimahla zokucwangcisa simahla ukukunceda ugcine ixesha kunye nomzamo.
IiNkqubo ezingama-35 zeMveliso eziPhezulu ze-iPhone (2021 ihlaziyiwe)
Ngaba ujonge ezonaapps zilungileyo zokuvelisa i-iPhone? Apha sikufumene nge-40 yezona zinto zibalaseleyo ngaphandle apho ungaphoswa kulo nyaka.
IiNkqubo ezingama-20 eziLungileyo zeMac zokuSebenza eziFunekayo ngo-2021
Ukuba ufuna ukuphucula imveliso yakho, xhobisa iMac yakho ngezi zixhobo ze-mac zibalaseleyo kwimveliso ukukunceda ufezekise ngaphezulu ngexesha elincinci.
Ungayichwetheza njani ngokukhawuleza: Iingcebiso ezili-12 zokuChwetheza kunye neTekhnoloji
Uzibuza ukuba uchwetheza njani ngokukhawuleza? Nazi iingcebiso ezili-12 zokuchwetheza ngokukhawuleza kunye neendlela ozifunayo ukuze uqale ngokusebenza ukuze usebenze ngakumbi.
I-7 yeXesha eliLungileyo lokuVimba iiNkqubo ezenza ukuba ukuCwangciswa kube lula
Ukuba ishedyuli yakho igcwele imisebenzi kwaye uphazamiseka ngokulula, ke ukuvimba ixesha sisisombululo kuwe. Nazi iindlela ezi-7 zokuvimba ixesha ezinokukunceda.
Iinkqubo ezili-10 ezimangalisayo ze-Intanethi zokuGxila kunye neMveliso
Indawo enye abantu abaninzi abalwa nayo ngoku ihlala igxile ngelixa besebenza. Ngethamsanqa, kukho ezinye iinkqubo ezintle ekugxilwe kuzo ezinokukunceda.
25 Iindlela ezimfutshane zeendlela ezimfutshane zeWindows ekufuneka uyazi ngoku
Ngaba ufuna ukusebenza ngokukhawuleza kwaye wandise imveliso? Nazi iindlela ezimfutshane ezingama-25 zewindows ezakonga ixesha kwaye inyuse imveliso yakho.
Master Ezi ndlela zimfutshane zingama-25 zokuSebenza ngokukhawuleza nangokuKrelekrele
Nokuba ungumsebenzisi omtsha we-Mac okanye ujonge ezinye iindlela ezimfutshane zokukhawulezisa umsebenzi wakho, ezi ndlela zingama-25 ziluncedo kakhulu kwiindlela ezimfutshane zeMac ziya kukunceda usebenze ngobuchule nangokukhawuleza.